स्वाभावदोष निर्मूलन प्रक्रियाको परिचय
१. विश्व भरिको दृश्य
२. व्यक्तिगत स्तरमा गलतिको प्रभाव
३. निजी सम्बन्धमा प्रभाव
४. समाजमा प्रभाव
५. स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया तपार्इलार्इ सहायता कुन प्रकार गर्छ
असावधानरहनुको कारण जब जनले चाबी भूल्यो कहाँ राख्यो, तब उनी हङबराउँदै खोज्दा आफ्नो केवल एक घण्टा मात्र होइन, पूरै घर अस्त-व्यस्त बनाइ आफ्नो पत्नीको मानसिक स्वास्थ्य पनि बिगाडि दियो ।
डबलीन, आयरलैंड, दिन १० बजे
ऐसलिङ्ग ग्यास चुलोमा राखेको सब्जी हर्न भूल्यो किनकि टेलिभिजनमा आइरहेको मन पर्ने कार्यक्रममा मगन भर्इन् । उनकी उत्तरदायित्वहीनता तथा लापरवाहीको कारण सब्जी जल्यो अनि पुनः भोजन बनाउनु पर्ने भयो ।
दक्षिणी कोरियाको तटमा कही, दिन ९ देखि ११.३० बजे
यस पल्ट त्यहि गलती तर गम्भिर परिणामको स्तरमा । फेयरी एम वी सेवोलको नाविक दल तथा व्यवस्थापनले जहाजमा तिनगुना भन्दा पनि अधिक माल राखिदियो । उत्तरदायित्वहीनता तथा कार्यपद्धतिको पालन नगर्नुको कारण मोडिने समय जहाज पल्टियो, जसले ३०४ यात्री तथा नाविक दल मरियो अनि १.७ लाख यूएस डॉलरको माल नष्ट भयो ।
ब्राजीलिया, ब्राजील दिउँसो १२ बजे
अधैर्य तथा लापरवाह स्वभाव को कारण रोबर्टोले तिब्र गतिमा रातो ट्रैफिक बत्ती (सिग्नल) पार गर्यो, जसले एउटा ठूलो दुर्घटना भयो अनि ओलिवियेरा परिवारलार्इ गम्भीर चोट लाग्यो ।
ऑकलैण्ड, न्यूजीलैण्ड दिउँसो २ बजे
जब एलेनको साथी मोनिकलार्इ सच्चा प्रेम मिल्यो, तब एलेन प्रसन्न हुनुको अपेक्षा उनीलार्इ ईर्ष्या गर्न थाल्यो। यसले उनीहरुको मित्रतामा दरार आयो अनि अन्तिमतः मित्रता समाप्त भयो ।
रोम, इटली दिउँसो ४ बजे
यो सुनेर कि पत्नीलार्इ बाहिर नजाउ भन्दा पनि बाहिर गर्इ यसले गिओवान्नी को अहंमा ठेस पुग्यो अनि उनलार्इ क्रोध आयो । उनले आफ्नो पत्नीलार्इ पिट्नको लागि कमरको पेटि निकाल्यो । उनको क्रोधको कारण गरिएको घरेलू हिंसाले उनको पत्नी एवं बच्चामा विपरीत प्रभाव पर्यो
लिस्बन, पुर्त्तगाल साँझ ६ बजे
साहस नहुने तथा असुरक्षाको भावना ले ग्रस्त भएको कारण एंटोनियो कहिले पनि काममा स्वयंको लागि खडा हुन सकेन, त्यसैले उनी सधैं नै निराशाको स्थितिमा रहन्थ्यो ।
स्टॉकहोम, स्वीडेन साँझ ७ बजे
जुलियाको अति भावनाशील स्वभाव को कारण भूतकालमा भएका कष्टदायक घटनाहरुका स्मरण गर्दछिन्, जसले उनी धेरै पल्ट रुन थाल्छिन् ।
दुबई, यूएई दिनको ११ बजे
मिठो भाषा बोल्ने इमरानले आफ्नो लोभ को कारण उनलार्इ विश्वास गर्ने आफ्नो भाई आसिफलार्इ पैतृक सम्पत्ति आफ्नो एउटा अवैध व्यवसायमा लगानी गर्न बाध्य बनायो । त्यो व्यवसाय अन्तिमतः असफल रहयो अनि आसिफलार्इ ठूलो आर्थिक हानि भयो ।
नई देहली, भारत, राति ९.३० बजे
अब त्यहि गल्ती ठूलो परिणामको स्तरमा । लोभ को कारण एउटा भ्रष्ट नेताले घूसबाट कमाएको लाखौं डलर आफ्नो स्वीस बैंकको निजी खातामा पढाउनको लागि अन्तिम प्रबन्ध गर्यो । यदि यो पैसा भारतमा नै रहिरहन्थ्यो भने, लाखौं भोको मान्छेहरुलार्इ एक माहिना सम्म भोजन प्राप्त हुन्थ्यो ।
यी केहि गलतिहरु हुन्, जो प्रायः विश्वभरमा गरिन्छन्; त्यस मध्ये केहिको परिणाम अत्यधिक दुःखदायी एवं भयावह हुन्छन् । माथिका गलतिहरुमा केहि गलति स्वयंबाट पनि हुन्छ, यसको हामी सबै निरीक्षण गर्न सक्छौं । त्यसको तीव्रता भिन्न हुन सक्छ, तर त्यो गलति मुख्यतः व्यक्तिमा विद्यमान स्वभाव दोषको कारण हुन्छ । स्वभावदोष, अर्थात घमण्ड, क्रोध, लोभ तथा आलस्य जस्ता मनमा अङ्कित संस्कार, जुन अनावश्यक विचार, भावना तथा गतिविधिलार्इ प्रोत्साहन दिन्छ अनि साथै स्वयं तथा अन्यलार्इ दुःख एवं हानि पुराउँछ ।
के तपार्इलार्इ पछिल्लो समय क्रोधित भएको स्मरण छ ? के तपार्इ त्यो समय प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो ? सम्भवतः थिएन । हाम्रो प्रत्येक कार्यशालामा उपस्थित सबैले थिएनमा नै जवाफ दिन्छन् । जुन व्यक्तिमा तीव्र स्वरूपको स्वभावदोष जस्तै क्रोध, आलस्य, निष्कर्ष निकाल्ने, उत्तरदायित्वहीनता इत्यादि हुन्छ, उनी प्रायः दुःखी व्यक्ति हुन्छ अनि उनको मन सदैव अशान्त रहन्छ । उनको प्रत्येक कृत्य तथा विचार उनको दोषले दूषित हुन्छ, यसको फलस्वरूप उनी स्वयं तथा अन्यलार्इ कष्ट दिन्छ ।
स्वभावदोषको कारण हुने गल्तीमा केवल स्वयंलार्इ मात्र होइन, तर हाम्रो आसपास रहने परिवार, सहकर्मी तथा मित्र जस्ता व्यक्तिहरुलार्इ दुःख दिने क्षमता हुन्छ ।
कहिले-काहीं हामीलार्इ लाग्छन् कि अन्यमाथि क्रोधित हुन उचित छन् । वास्तविकता यहि हो कि यद्यपि हामीलार्इ लग्छन् कि हाम्रो दुःखको कारण कुनै व्यक्ति हो, जसले हाम्रो साथ केहि अनुचित गर्यो; तर उनिमाथि क्रोधित हुनाले मात्र हाम्रोनै दुःखमा वृद्धि हुन्छन् ।
समाजमा हाम्रो स्थिति जति उच्च छ अथवा अन्यमा प्रभाव जति अधिक हुन्छ, त्यति नै धेरै व्यक्तिहरु हाम्रो स्वभाव दोषको नकारात्मक रूपले प्रभावित हुन्छन् । स्वभाव दोष हामीलार्इ गल्ती गर्न तथा अनुचित निर्णय लिनको लागी प्रोत्साहित गर्दछ । अनि यदि ती गल्तीबाट व्यक्तिहरुलार्इ कष्ट पुग्छन्, तब हामी स्वयंमा नकारात्मक कर्मको बोझ बढ्दछन् । यसको फलस्वरूप हामी अनेक जन्मसम्म तथा मृत्युपछिको जीवनमा त्यसलार्इ भोग्नु पर्दछन् ।
सुखदायक जीवन तथा मनमा शान्ति पाउनको लागि आफ्नो मनबाट स्वभावदोष निकाल्ने, एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । ट्युटोरियलको यस श्रृंखलामा, हामी तपार्इलार्इ स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया सिकाउँछौं । जब यो प्रक्रिया साधनाको अन्य चरणहरुको साथ निष्ठापूर्वक नियमित गरिन्छ, तब हाम्रो स्व-वास्तवीकरण (self-actualisation) प्रक्रिया हुन्छन् । यसको अर्थ हो कि, यो प्रक्रियामा यति क्षमता छ कि व्यक्तिको जीवन उच्च स्तरसम्म उठाउन सक्छ तथा उनको शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति गर्नमा सहायक हुन्छ । जब क्रोध एवं लोभ जस्ता स्वभाव दोष हामीमा अल्प हुन जान्छन् तब केवल हामी मात्र सुखी होइन्न् तर हाम्रो सम्पर्कमा रहने पनि लाभान्वित हुन्छन् । SSRF को तर्फबाट स्वभावदोष निर्मूलन तथा अहं निर्मूलन प्रक्रिया अभियानमा हामी सबैलार्इ स्वागत गर्दछौं ।